‘साइकल लेन’ भन्दा पहिले ‘साइकल मेन’ – MySansar
‘साइकल लेन’ भन्दा पहिले ‘साइकल मेन’
Posted on July 30, 2014 August 6, 2014 by mysansar
– हरि पौडेल –
यदि तपाई काठमान्डूमा वा अन्य ब्यस्त सहरमा पनि साइकल चलाउन चाहनुभएको छ – बाध्यताले या रहरले, तर उपयुक्त साइकल लेन नभएको कारणले मात्र साइकल चलाउन बाट हच्किनु भएको छ अथवा तपाई साइकल चढिरहदा पनि साइकल लेन नभएको कुराले तपाइको साइकल चढ्ने उत्साहमा क्षय ल्याइरहेको छ भने यो लेख तपाइको लागि हो। काठमान्डूमा हरेक ठाउमा साइकल लेन छ, मात्र आवश्यकता साइकल यात्रीको हो।
काठमान्डूमा साइकल चढ्ने कुरा आउना साथ संगै जोडिएर साइकल लेन को कुरा आउने गर्छ । साइकल लेन भन्नाले साइकल कै लागि भनेर बनाइएको छुटै बाटो भन्ने बुझिन्छ। साइकल लेन र अरु बाटाहरुमा धेरै फरक हुन्छ। साइकल लेन साइकलको साइज, तौल, गुड्ने गति आदि कुरा ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिन्छ। तेसैले यो गाडी गुड्ने बाटो भन्दा साघुरो सानो चौडाईको हुन्छ, गाडीको लागि जस्तो बलियो भुइँ बनाइँ रहनु पर्दैन, तर माथिल्लो सतह जहाँ पांग्राको सम्पर्क हुन्छ त्यो भने निकै लेवल मिलेको र चिल्लो हुनु पर्छ। साइकल को पांग्रा निकै मसिनो र चिल्लो (गाडीको भन्दा) हुने हुनाले सानो तिनो गेग्रोटो वा खाल्डा खुल्डी ले पनि निकै अप्ठोरो पार्छ।
यतिले मात्र साइकल लेन पूर्ण हुने भन्ने होइन। त्यस देखि बाहेक साइकल लेनको भिरालो पन सक्दो कम (थकान बिना साइकल चलाउन मिल्ने) हुनु पनि पर्यो। साइकल लेन २४ सै घण्टा साइकल को लागि मात्र खाली हुनु पर्यो, मान्छे हिड्ने, मोटरसाइकल, ट्याक्सी पार्क गर्ने, ठेला राख्ने आदि बिल्कुल हुनु भएन। साइकल लेन र गाडी हिड्ने बाटो जोडिएको ठाउमा एकदम सुरक्षित र बैज्ञानिक तरिकाले बाटो क्रस गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हुनु पर्यो। रातिमा साइकल चलाउनको लागि बत्तिको व्यवस्था हुनु पर्यो।
हो माथि भनिएको जस्तो साइकल लेन हाम्रो देशमा कहिँ पनि छैन तर देश अनुसारको, हामीले प्रयोग गर्दै आएको अन्य कैयन सेवा सुबिधा तथा बस्तु अनुरुप या भनौ हाम्रो देशको बर्तमान बिकासको स्तर अनुरुपको साइकल लेन भने प्रसस्त छन् यहाँ। तपाइले अहिलेकै अवस्थामा पनि साइकल को भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ अझ बिसेस गरी काठमाडौँ जस्तो सहरमा। तर त्यो भन्दा पहिले तपैले साइकल लेनको हाउगुजी दिमगबाट झिकेर फ्याल्नु पर्नेछ।
साइकल अरु मोटर जडित सवारी भन्दा बिस्तारै गुड्ने हुनाले सडकको सबै भन्दा बाया पट्टिको एक धर्सो जुन तपाइलाई मज्जाले साइकल चलाउन आवस्यक पर्छ त्यो तपाइको साइकल लेन हो।
हैन, तपाई यसलाई साइकल लेन मान्न तयार हुनुहुन्न भने तपैले देखेको अधिकांस सडक सडक होइनन, फुटपाथ फुटपाथ होइनन, सार्बजनिक यायाता कुखुरा बोक्ने ट्रक हुन्, काठमान्डूमा पिउने पानि छैन, सास फेर्न लायक हावा छैन, आदि आदि …।। यसरि सोच्दा यहाँ जीवनको अस्तित्व छैन भन्ने कुरा सम्म पुग्न सकिन्छ र हात लाग्छ केवल निरासा।
यसो भनिरहदा अहिले जे छ त्यो ठिक छ भन्न खोजेको होइन। उपयुक्त साइकल लेन हुदा एउटा साइक्लिस्टले जति सजिलो र सुरक्षित महसुस गर्छ त्यो नहुदाको अवस्थामा पक्कै फरक पर्छ। साइकल किन्ने र बेच्ने काम बाहेक साइकल जस्तो बाताबरण मैत्री साधनको प्रोत्साहन र प्रबर्धनमा जति प्रयास हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा अत्यन्त न्युन मात्र हुन सकेको छ।
मैले यहाँ नेर जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने सबै कुरामा क्रमिक सुधार हुदै आउने हो। सुधार त्यो क्षेत्रमा बढी हुन्छ जसमा मानिसको चासो धेरै हुन्छ। काठमान्डूको सुकेधारा र एरपोर्ट क्षेत्रमा धेरै पहिले नै साइकल लेन बनिसकेका थिय। ति अझै पनि छन्। तर तेहा कसैले पनि साइकल गुडाउदैन। किनभने त्यो साइकल लेनले सुरुका दिन मा साइकल को दर्शन नै पाएन अनि कसैले वास्ता पनि गरेन, अहिले अलि अलि साइकल यात्री बढ्दै छन तर साइकल लेन साइकल चलाउनको लागि लायक रहेन। बरु साइकल हरु जति छन् चक्रपथमै गुड्छन।
त्यहाँ ओछयाएको रातो टाईलको धर्सो साइकल लेन हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा पनि छैन होला। चासो भयो भने न थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि परिबर्तनको लागि सक्दो पहल होला, बहस छलफल होला र अनि आवस्यक सुधार होला।
अहिले भर्खरै पनि माइतीघर देखि बानेश्वर हुदै तिनकुने सम्म साइकल लेन बनाइएको छ। त्यो लेन लगभग पुरा भैसक्यो तर तेहा कुनै साइकल गुडेको देख्न पाइदैन। साइकल जति छन् सबै बिचको पिच बाटो मै चल्छन्। यस्तो किन त ? कारण हो अति कम गुणस्तरको लेन। अबैज्ञानिक डिजाइन। तपाई आफै हेर्न सक्नु हुन्छ सानो सानो इटको टुक्रा हरु जोडेर उखड बाखड परेको सतह निर्माण गरिएको छ। त्यो मुनिको माटो राम्ररी खादिएको छैन र अहिले नै कतै दबेको कतै उठेको देख्न पाइन्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली स्ट्याण्डर्डको साइकल लेन तेही बानेश्वरको लेन हो। त्यो पनि निकै दबाबका बाबजुत बनेको कुरा तपाइलाई साइकलमा अलिकति चासो छ भने थाहा पाउनु भएकै होला।
तपाइले साइकल चढ्नु भएन भने मैले साइकल चढ्न छाडे भने तपाई हाम्ले चासो दिएनौ भने त्यो साइकल लेन पनि एरपोर्ट को जसरि बिलिन भएर जाने छ। अनि हामि पछीका नागरिक हरु साइकल लेन पर्खेर नै आफ्नो साइकल चढ्ने रहर खादेर बस्नेछन।
तर एउटा कुरा नबिर्सनुस “साइकल मेन” आएपछि बल्ल “साइकल लेन” आउने हो कम्तिमा हाम्रो जस्तो विकासशील देश मा यो बिकासको नियम नै हो हरेक क्षेत्रमा यही लागु हुन्छ।
यसो भन्दैमा आफुलाइ असुरक्षित वा असजिलो हुदा हुदै पनि साइकल चढ्नु पर्छ भन्ने चाही पटक्कै होइन। त्यसो गर्नु मुर्खता हुनेछ। तर साइकल लेन बनेर मात्र सबै ठिक हुन्छ, हाम्रो सहर साइकल मैत्री भैहाल्छ भन्ने सोचाई पनि गलत छ भन्ने बुझ्नु जरुरि छ।
साइकल कति सुरक्षित छ कसरि थाहा पाउने त?? त्यसको एक सजिलो उपाय हो – साइकल चढेर हेर्नु।
मैले फेरी पनि जोड दिन्छु उपयुक्त साइकल लेन हुदा र नहुदाको अवस्थामा सडकमा गरिने यात्राको गुणस्तरमा धेरै फरक पर्छ। ठिक साइकल लेनले सवारी व्यस्थापनमा पनि ठुलो सहायोग पुर्याउछ। साइकल लेन जति साइकल यात्रीको लागि आवस्यक छ तेती नै अरु मोटर चढ्ने हरुको लागि पनि आवस्यक कुरा हो।
मेरो आफ्नो अनुभवमा काठमान्डू मा गरिने छोटो दुरीका यात्रा हरुमा अरु सबै सवारी साधन भन्दा साइकल समग्रमा बढी उपयोगी साबित हुन्छ। त्यसको लागि सडकको बाया पट्टिको एक धर्सोलाइ तपाइले साइकल लेन सम्झेर सम्पुरण ट्राफिक नियम पालन गर्दै पूर्ण आत्मा विश्वासका साथ् साइकल चढ्नु पर्नेछ। चढी हेर्नुस, तपाइले सोचेको जस्तो डरलाग्दो छैन काठमाडौँ साइकलको लागि।
सबैका जस्तै काठमान्डूमा साइकलको पनि अनेक समस्याहरु छन्। ती कुराहरु समय मिल्दा लेख्दै गरौला।
सबै मानिसले साइकल चढ्नु पर्छ भन्ने छैन र चढ्ने वाला पनि छैनन्। साथै साइकल ठिक अरु मोटरसाइकल तथा गाडी हरु बेठिक भन्ने पनि होइन। सबैको आ आफ्नै फाइदा छन्। तर यदि तपाई सच्चि काठमान्डूमा साइकल चढ्न चाहनुहुन्छ, काठमान्डूको बाताबरण सफा भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने साइकल लेन नपर्खनुस, तपाईले साइकल चढ्न जति ढिलो गर्नुहुन्छ, साइकल लेन तेती नै ढिलो गरी काठमान्डू आउनेछ।
9 thoughts on “‘साइकल लेन’ भन्दा पहिले ‘साइकल मेन’”
इन्जिनियर हरि पौडेल लाइ अति मार्मिक बिसयमा बहस सुरु गराउने खालको लेख लेखेको मा हार्दिक बधाई छ, काठमान्डू जस्तो सहर मा साइकल ले हरेक मौसम मा तपाइहरुको यातायात को आबस्यकता पुरा गर्दछ
….साइकल चड्ने रहर छ तर माइक्रो बस यमराज भएको छ, जोगिने गारो छ
काठमाडौँमा साइकल चलाउन थालियो भने, आधा ट्राफिक र पलुसन आफैं कम हुन्छ . त्यति मात्र हैन अरु फाइदाहरु: पब्लिक यातायात भन्दा कम पैसा लाग्ने, कम समय मा पुग्ने, ब्यायाम पनि हुने.
तर, त्यही हो. साइकल लेनमा पनि मोटर साइकल कुदाउने होला. फूटपाथमा त छोड्दैनन.
तपाईले साइकल चढ्न जति ढिलो गर्नुहुन्छ, साइकल लेन तेती नै ढिलो गरी काठमान्डू आउनेछ। …. धेरै राम्रो तर तराई मा साइकल चड्ने मानिस धेरै हुदापनि किन साइकल मैत्री सडक नबनेको होला है ?
समाज र जनता लाइ सचेत गराउने पर्ने बिसये बस्तु राख्नु भएको छ. एकदम सम्दर्विक छ र काठमान्डू लाइ मात्र येस्को आवस्येक हैन कि देश को सबै अस्त ब्येस्त सहर को जनता हरु अनि नगर पालिका हरु लाइ साइकल लेन को पुर्बा धार आयोजना हरु अनि जनता मा चेतना को आवशेक्ता को येसरी नै खाचो छ. लेख्दै गर्नुस. ध्न्येबाद.
कुरा सारै चित्त बुझ्दो लाग्यो तर के गर्ने, साइकल लेन मा त माइक्रो हरु रन्थनिएर ल्याउछन भन्या… अनि त के पो गर्ने होला, यो माइक्रो हरु लाइ तह नले सम्म साइकल लेनको कुरा गर्नु उपर्युक्त देखिन मैले, तर यो भन्दैमा साइकल नाकुदाउनु भन्न खोजेको भने हैन है 🙂
कुरा सहि हो …साइकल यात्री बढे भने सम्बन्धित निकायलाई पनि दबाब हुन्छ … सुरु गरौ साथीहरु … हप्ताको एकदिन भाडामा लिएर भने पनि …
महाशय, साइकल चढ्न त सारै मन छ तर,काठमाडौँको बाटाहरुमा साइकल चढ्नु भनेको आत्महत्या गर्न खोज्नु जस्तै-जस्तै हो…आगे हजुरको मर्जी !
धेरै राम्रो कुरो हो…. तर साइकलमेन मात्र होइन साइकलवोमेन पनि हुनु पर्यो… हाम्रो चितवन मा त साइकलवोमेन नै धेरै छ…